Voasivana Tao Ejypta Ny Tranonkalan’ny Vondrona Mpiaro Zo Sy Ny Bilaogin’ilay Mpanao Matoandahatsoratra · Global Voices teny Malagasy
Manohy ny sivana amin'ny aterineto ny manampahefana ao Ejypta
Voadika ny 14 Aogositra 2017 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, عربي, Deutsch, English
Sary avy amin'ilay mpisera Flickr, Turinboy (CC BY 2.0)
Nanohy nanakana tranonkala ireo manampahefana Ejiptiana, mikendry ny tranonkalan'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy ny bilaogin'ny mpanao gazety mpanao matoandahatsoratra indray tamin'ity indray mitoraka ity.
Nandritra ny faran'ny herinandron'ny 5 Aogositra, nakaton'ny governemanta ny tranonkalan'ny Tambajotra Arabo ho an'ny Vaovao momba ny Zon'Olombelona (ANHRI), izay misy antontan-taratasy sy tatitra momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Ejipta sy manerana ny faritra Arabo.
Tamin'ny fanambarana 6 Aogositra nivoaka tao amin'ny Facebook, namely ny manampahefana Ejipsiana noho izany fepetra izany ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona, ary mbola mampanantena hanohy ny asany ho fanohanana ny zon'olombelona ao amin'ny faritra arabo:
Vonona hatrany hanohy ny asany amin'ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra, ny zon'olombelona ao amin'ny tontolo Arabo, mampahafantatra ireo fanitsakitsahana misy ao anatin'ity faritra ity, ary miloa-bava ho an'ireo niharam-boina, izay andraikitra tena goavana noho ny hatramin'izay, ary lasa zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay. ny Tambajotra Arabo misahana Vaovaon'ny Zon'Olombelona – na dia eo aza izany fanafihana izany, izay fanesoan'ny manampahefana ny lalàna sy ny lalàmpanorenana Ejiptiana.
[…] Manamafy ny ANHRI fa hitady ireo fitaovana ara-teknika rehetra izy mba handresena ny fanakanana ary tsy hiala amin'izany, ary manizingizina koa fa hanohy ny asany.
Ny ANHRI no tranonkala voalohan'ny vondrona mpiaro zon'olombelona ao Ejipta voasivana, satria nanakatona tranonkala 21 ny manampahefana tao anatin'ny roa volana mahery, anisan'izany ny tranonkalam-baovao tsy miankina Mada Masr, ny famoahan-dahatsoratra amin'ny teny Arabo, Huffington Post, ary ny tranonkalan'ny tambajotra Al Jazeera ao Qatar, satria voalaza fa “manohana fampihorohoroana”.
#Egypt : Noho ny onjan'ny fanakanana tranonkala, voasakana ny tranonkalan'ny zon'olombelona – @anhri – loharanom-baovao lehibe momba ny zon'olombelona amin'ny teny arabo https://t.co/NIZmOpDS5K
Ankoatra ny ANHRI, tsy azo nidirana tao Ejypta intsony ihany koa ny bilaogin’ ilay mpanao matoandahatsoratra sady mpikaroka momba ny zon'olombelona, Ahmed Gamal Ziada. Nampiasa ny bilaoginy i Ziada mba hanaparitaka famakafakana sy lahatsoratra ho an'ireo tranonkala sy media voasakana any Ejipta. Ankehitriny, lasibatra ihany koa ny bilaogy natsangany handosirana ny milina fanivanana ataon'ny governemanta Ejiptiana. Mbola azo idirana kosa ny tolotra mpamoaka bilaogy Blogger, izay mampiantrano ny bilaogin'i Ziada.
Nandany 500 andro tany am-ponja kosa ilay mpanao gazety mpaka sary teo aloha, Ziada rehefa nosamborin'ny mpitandro ny filaminana Ejiptiana tamin'ny Desambra 2013 noho ny fitaterana ny hetsi-panoheran'ny mpianatra sy naka sary mpitandro filaminana nidaroka mpianatra roa. Miresaka indrindra momba ny toe-draharaha politika sy ny zon'olombelona ao Ejipta ny lahatsorany.
Tao amin'ny Facebook, nisaintsaina momba ny fanakanana ataon'ny governemanta amin'ny bilaoginy sy ny dikan'izany aminy izy:
Efa tranainy ny [tetikady] fanakanana bilaogy, saingy io no laharam-pahamehana amin'ny andron'ny [filoha] Abdelfattah al-Sisi, ary ankoatra ny hoe mety tsy zava-dehibe ho an'izao tontolo izao ny fanakanana ny bilaogy, zava-dehibe amiko noho ny antony roa kosa izany:
1) Nahatonga ahy hahatsapa izany fa tratran'ny fahirano tokoa aho; fisamborana, fikasana hamono, ​​fampitandremana noho ny antony fiarovam-pirenena, fanakanana ny bilaogiko, miampy ny tranonkala tsirairay izay niasako.
2) Noporofoin'izy ireo fa tsy manoratra zavatra tsy misy dikany aho, amin'ny teny hafa, misy fiantraikany ny teniko na dia ho an'ny mpihaino vitsy aza.
Te hilaza aho fa ny bilaogy dia tahiry ho ahy. Nanomboka nampiasa izany aho mba handefa lahatsoratra hialàna amin'ny sivana. Saingy, amin'izao fotoana izao, nakaton'izy ireo izany, ary [nampiseho] fa matahotra ny [teniny] izy ireo, mbola afaka manova ny rohy aho na mamorona bilaogy faharoa. Mitohy hatramin'ny farany ny herim-po.
Ny 24 May ka hatramin'ny 6 Aogositra, nanakatona tranonkala 133 ny manampahefana Ejiptiana, araka ny filazan'ny Fikambanana ho amin'ny Fahalalahan-kevitra sy Fanehoan-kevitra (AFTE), izay nanatontosa andrana ara-teknika tao amin'ny tambajotran'ireo Mpamatsy Tolotra Aterineto isan-karazany, anisan'izany ny Orange, Vodafone sy ny Etisalat. Nanadihady momba ny fanakanana tolotra natao hialàna amin'ny sivana amin'ny aterineto sy ny fidirana amin'ny tambajotran'aterineto manokana, fantatra amin'ny anarana hoe Virtual Private Networks (VPNs) ihany koa ny AFTE Nitatitra ny fikarohana nataony ny fikambanana:
Ny alatsinainy 12 jona, nahamarika ny fiandohan'ny fanakanana tranonkala manome tolotra VPN izahay. Manondro ny fikasan'ny Governemanta hanohy hanakana sy hanivana votoaty azon'ireo mpiserasera Ejiptiana hidirana izany.
Ny mahatonga ny toe-javatra miharatsy dia, noraisina mangingina sy “tsy misy dingana ara-dalàna” ve ireo fanapahan-kevitra hanakatona tranonkala ireo, izay manome fahafahana ho an'ny Ejiptiana hanohitra izany eny amin'ny fitsarana. Ankehitriny, ny fanontaniana dia hoe hatraiza ny fahavononan'ny governemanta Ejiptiana hanao ny hetsika fanivanany ny aterineto ary iza no ho lasibatra manaraka.